३ श्रीमानको एउटा श्रीमती ! क्वारेन्टाइनमा छु भन्दै अर्कोसंग बिवाह (भिडियो हेर्नुस्):: Naya Nepal
३ श्रीमानको एउटा श्रीमती ! क्वारेन्टाइनमा छु भन्दै अर्कोसंग बिवाह (भिडियो हेर्नुस्)
अहिले सामाजिक संजालमा विभिन्न भिडियो भा ईरल भए संगै फेरि यस्तो अनौंठो घ’टना घटेको छ । खोटाङ घर भएकी एउटा महिलाले एक महिनामा तीन जना पुरुष संग बिवाह गरेको रहस्य अहिले सामाजिक संजालमा भाईरल भएको छ । ती महिलाले पहिला नै २ जना संग बिवाह भइसकेकोको रहेछ ।
खोटाङ जिल्ला रुपाकोट सगरमाथा नगरपालिका २ घर भएका भुमि राज खत्रीकी श्रीमती अहिले फेरि अर्कोे बिवाह गरेकी छन । एउटौ संस्थामा कामगर्दा गर्दो माया बसेको र बिवाह पनि भएको २ बर्ष भएको बताए ।
श्रीमतीले काठमाडौं दाई संग पैसा लिन जान्छु भनेर घर बाट निस्केको बताए धेरै दिन हुदापनि श्रीमतीले आफु संगै सम्र्पक नगरेको थाहा पाएपछि । श्रीमतिलाई फोन गर्न खोज्दा आफुलाई सबै ठाउबाट बल्क गरेको बताए ।श्रीमती अर्के संग बिवाह गरेको साथी मार्फत थाहा पाएका खत्री ले बताए छन् । फेरि उनको पहिलाको श्रीमान बाट पनि एउटा ६ बर्षको छोरा भएको थप रहस्य आफुले थाहा पाएको बताए । खत्रीले आफुसंग बिवाह भएको फोटो र अहिले गौतम संग बिवाह भएको भिडियो आफुले आफ्नो फेस बुक मार्फत पोष्ट गरेको बताएका छन् ।
उनका श्रीमान व्रिक्रम गौतम ले आफ्नो मान हानी भयो भन्दौ काठमाडौंको टेकुमा जाहेरी दिएका जाहेरीको आधारमा आफुलाई टेकु प्रहरीले प’क्राउ गरेको बताए । अनुसन्धानको क्रममा टेकु केहि दिन बसेको र आफुले न्याय नपाएको भन्दौ प्रमाण सहित मिडिया आएका छन् ।